Merry Chrimas & Happy New Year-Iindaba-VSmile Co., ltd
Ixesha: 2020-12-24 I ngxelo:57
Enkosi ngokunamathela kwiVsmile kulo nyaka unzima ozele yimiceli mingeni emininzi.
Ukhuphiswano lweemveliso zethu luzuzile kwayeukwanda kwesiseko sabathengi kwaye ukuthengisa kwethu kuyaqhubeka nokukhula ngokukhawuleza kwi-2020 edlulileyo, kodwa siyazi kakhulu ukuba asinakuyenza yenzeke ngaphandle kwenkxaso yakho.
Njengokuza kweKrisimesi, Ngamana umlingo weholide uzalisa ikhaya lakho ngovuyo noxolo. Ukuthumela uthando oluninzi kusapho lwakho. Ndininqwenelele amaxesha oxolo phakathi kobunzima, imfudumalo yeenkumbulo kwezi holide, kunye namava amnandi ovuyo.
Lo nyaka awufani nakweminye iminyaka ubhubhane weCovid-19 uhlasele, sijamelene nemiceli mngeni engazange ibonwe, kodwa ngethamsanqa safumana omnye nomnye, siyakhuthazana, siyancedana, siyancedana enye, zikhule kunye.kwaye ekugqibeleni, siyigqiba.Yonke into ibuyele esiqhelweni kwikamva elikufutshane, sinokuhlangana kunye ne-shank hkwaye kunjaloon, zikhathalele kwaye uhlale ukhuselekile.
Ekugqibeleni, enkosi kwakhona ngokujoyina usapho lweVsmile, siya kuhlala sibeka iqabane lethu kwindawo yokuqala, kwaye siqhubeke siphucula iimveliso kunye nenkonzo yethu.
Krisimesi emnandi nonyaka omtsha
IVsmile Biotechnology Co, Ltd
I-PREV: Iingcebiso zokuFakelwa kweVsimle Bur
OKULANDELAYO : Izikhokelo zeLebhu yamazinyo Ukukhetha ifom efanelekileyo yeZirconia